Kudya Kunochengetedza Muviri Wako Hutano: Dzidza Izvo Zvavari!
Zvokudya	 25 April 2019
Mazuva ano nekudya kwakanyanya kwemaindasitiri, akawanda akagadzirira kudya-kudya uye kumhanya kwehupenyu hwezuva nezuva, vanhu vazhinji vanofarira zvinhu zvinokurumidza kana zvakagadzirira-kudya izvo zvisina kugara zvine hutano kana zvakanaka kumiviri yedu.
Kudya kune hutano kunoonekwa nevazhinji kusagwinya kana kusava nebasa, nekuti imomo mune chikanganiso chikuru, chero chikafu chikabikwa nenzira kwayo chinogona kunge chiri chinonakidza uye chinonaka.
Kune mazuva ano maresitorendi anonyanya kudya zvine hutano izvo zviri kudiwa zvakanyanya. Kana usiri nyanzvi yekugadzirira uyezve usina nguva yakawanda yekupa pakubika, tsvaga maresitorendi muguta rako asingaregi kushandira chikafu chine hutano uye chinonaka.
Zvikafu zvinofanirwa kuverengerwa mukudya
Kuti isu tigadzirise pfungwa yedu pachedu yechikafu, isu tinofanirwa kutanga tanzwisisa zvekutanga zvezvose chikafu, ndiko kuti, chikafu chinodyiwa zuva nezuva pasina kunyepedzera, ndea:
zviyo nemidzi - Izvi ndezvekudya izvo, sezvo zvakapfuma mumakabhohaidhiretsi, zvinopa simba rakawanda kwatiri kuti tiite zviitiko zvezuva nezuva, nepo kune avo vanoita zvinoitwa nemuviri, vanofanirwa kudyiwa mune yakati kurei kupfuura zvakajairwa.
Zvibereko, miriwo nemiriwo - akakosha kuchengetedza hutano uye kushanda kwakakodzera kwemuviri, sezvo ivo vakapfuma mune fiber, mavitamini uye mamineral.
Lentil nyemba uye pizi - Chikafu chakazara mupuroteni, miriwo, simbi uye faibha.
Nyama uye zvekudya zvemhuka - Ivo vakapfuma mucalcium uye mapuroteni anosimbisa, kukura uye kuumba ganda, nzara, vhudzi, mazino nemapfupa.
Kudya kunoonekwa sekusina hutano ndekwakafuma mushuga senge zvihwitsi, zviwitsi, machokoreti, ayizi kirimu, nezvimwewo, chikafu chakakangwa nemafuta emuriwo, majarini kana bota uye chikafu chine munyu wakawandisa, chiripo muzvikafu zvakawanda, hachina hutano. chikafu.
Mamwe matipi ezvekudya zvine hutano uye mashandiro ayo
Mbatatisi dzakapfuma mumhangura izvo zvinomutsa kugadzirwa kwecollagen zvinobatsira kuchengetedza ganda rakasimba uye kudzivirira kuunyana.
Zvibereko zvitsvuku zvakapfuma muma antioxidants, ayo mukuwedzera pakuchengetedza kushanda kwakanaka kwehuropi nemoyo, zvinosiya ganda rakatsetseka.
Nzungu dzakapfuma mumafuta ane hutano, antioxidants, fiber, mapuroteni, mavitamini uye zvicherwa uye akakura kurasikirwa nevabatsiri.
Nguva dzose yeuka kutsvaka kudya kune hutano kuitira hupenyu hwakanaka uye hupenyu hwakareba. Paunenge uchitenga kuchitoro chikuru kana kuodha ndiro kuresitorendi, gara uchisarudza zvigadzirwa zvechisikigo, senge chikafu chinowanikwa mune iri raibhurocha bhurocha, kana kusarudza zvigadzirwa zve organic.
Uye imwezve yegoridhe tip
"Imwai mvura yakawanda?"
Muviri wedu wakagadzirwawo nemvura, ichi chishamiso chechisikirwo hachikwanise kushayikwa kubva kumatipi edu, isu tinofanirwa kunwa anosvika marita maviri emvura pazuva. Mvura inounza isu mabhenefiti akati wandei, kuwedzera kune hydration, inodzora tembiricha yemuviri, inodzinga, inonwisa uye inoendesa zvinovaka muviri neoksijeni.
Saka rombo rakanaka mukutsvaka kwako chikafu chakazara mumapuroteni uye zvinovaka muviri izvo zvakanaka kune hutano hwako!
Hypertrophy Workouts: Nzwisisa mhando yega yega yekurovedza muviri
DHEA: Tarisa uone ichi chekuwedzera icho chave kuita mufashoni muhutano hwepasi!
Kurapa Kumba Kwekudzvinyirira Ropa: Tsvaga Anoshamisa Maitiro!